CIN Khabar देवीदेवताको चोरीतस्करी नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण
देवीदेवताको चोरीतस्करी नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण नेपालबाट चोरीएका मूर्तिहरू सबभन्दा धेरै अमेरिकामा (अडियोसहित)
शोबिता रिसाल शुक्रबार, वैशाख २०, २०७६, ०२:४७:००
काठमाडौँ । ललितपुर महानगरपालिका ८ का अध्यक्ष रवीन्द्र महर्जनले खोकनाको रुद्रायणिदेवी मन्दीरबाट इन्द्रायणि र कुमारीको मूर्ति हराएको उजुरी पुरातत्व विभागमा लेखाउनुभयो । यो करिब ढाइ वर्ष अघिको कुरा, २०७५ चैत २१ मा ललितपुर १३ बाट ढुङ्गाको मूर्ति हरायो ।
टोल सुधार समितिका अध्यक्ष तीर्थ आचार्यले विभागमा लिखित जानकारी गराउनुभयो । आफ्नो टोलका मन्दीरबाट मूर्ति हरायो भन्दै विभागमा हरेक वर्ष ५/६ ओटा उजुरी पर्छन् ।
पुरातत्व विभागको अभिलेख हेर्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा मूर्ति हराएका ५ ओटा उजुरी परे । आर्थिक वर्ष ७२/७३ मा यो सङ्ख्या ४ थियो भने त्यसको अघिल्लो वर्ष २ ओटा उजुरी परेका थिए ।
२०६४ देखि २०६८ को मात्र हिसाब गर्ने हो भने १८ ओटा मूर्ति हराएको उजुरी विभागमा परेको थियो । रहस्ययूक्त कुरा यो छ कि हराएका मध्ये असाध्यै कम मूर्ति बारे मात्र खोजीका लागि उजुरी पर्ने गरेको छ ।
सङ्ग्राहलय घुमेका व्यक्तिहरूको कुरा मान्ने हो भने पुरातत्व महत्वका मूर्ति, चित्र मात्रै होइन, ललितपुरको भोटो जात्राका समयमा देखाईने भोटो, कुमारीको शीरमा लगाउने मुकुट बेलायतको सङ्ग्राहलयमा पुगेका छन् ।
नेपालबाट हिन्दु धर्मका तारा, सरस्वती, बसुन्धरा, इन्द्र, बिभिन्न पौराणिक तथा साँस्कृतिक महत्वका चित्र र बुद्धका मूर्ति सबभन्दा धेरै हराएका छन् ।
त्यस्ता मूर्तिहरु कसले चोर्छ ? कहाँ बेचिन्छ ? सम्पदा बचाउ अभियान सङ्घर्ष समितिका संयोजक गणपतिलाल श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ, ‘नेपालबाट चोरिएका मुर्ति नेपालमा त पक्कै राखिदैन, किन कि नेपालमा त यतिकै पनि यस्ता खालका मूर्ति तथा सम्पदाहरूको कमि छैन ।’
नेपालबाट हराएका मूर्तिहरू विदेशमा नै लगिने गरिएको उल्लेख गर्दै उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘टोल छिमेकमा पूर्ति हरायो भन्दै खोजीको लागि सहयोग गरिदिन स्थानीयले मसँग बारम्बार आग्रह गरिरहन्छन् । तर हराएका मूर्ति र सम्पदा भेटाउन सजिलो छैन ।’
ललितपुरको इटमबाहालबाट ३९ वर्षअघि हराएका ३ ओटा पौवा चित्र अमेरिकाको न्यूयोर्कस्थित एउटा सङ्ग्राहलयमा देखिने गरेको त्यहाँबाट फर्केर आएकाहरूले बताउने गरेका छन् ।
खोजी गर्दै जाँदा पत्ता लाग्यो, नेपालबाट हराएका मूर्ति तथा सम्पदा सबैभन्दा धेरै अमेरिकाका बिभिन्न सङ्ग्राहलयमा छन् ।
बेलायतका सङ्ग्राहलयमा पनि नेपालका सक्कली सम्पदा छन् भने जापान र इटलीका पसलहरूमा नेपालका मूर्ति बेच्न राखिएका छन् । नेपालबाट तस्करी गरी पुर्याइएका धेरै मूर्तिहरू विदेशका भण्डारण कक्षमा थन्किएका छन् ।
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोका डीएसपी कबित कटुवालका अनुसार हराएका तथा अहिले भएका मूर्तिहरूको राम्रो अभिलेख छैन, जसले गर्दा मूर्तिको आकार, प्रकार, तौलदेखि लम्बाइ चौडाइसम्मका पूर्ण जानकारी राख्ने चलन छैन । त्यसैले हराएका मूर्ति कतै भेटियो भने पनि नेपालकै हो भनेर दाबी गर्न सकिँदैन ।
नेपाल सरकारले उच्च तहबाट पहल गरे ती मूर्ति फिर्ता ल्याउन सकिने बताउनुहुन्छ, सम्पदा संरक्षणविद् तेजरत्न ताम्राकार । ‘हराएका यस्ता मूर्तिहरू कुनै व्यक्ति वा संस्था मात्रै लागेर फिर्ता आउँदैन । सरकारी स्तरबाटै पहल गरेको खण्डमा मूर्तिहरू फर्काउन सकिन्छ ।’ सम्पदाविद् ताम्राकारले भन्नुभयो ।
१९ सय ६० देखि ९० को दशकमा नेपालबाट धेरै मूर्ति हराएको पुरातत्व विभागगको विश्लेषण भए पनि कति हराए भन्ने तथ्याङ्क भेटिँदैन । १९९० र त्यसपछिका भूकम्पले मठ, मन्दीर भत्किएपछि मूर्ति हराउने क्रम झन् बढ्यो ।
पुरातत्व विभागका प्रवक्ता रामबहादुर कुवँर भने अहिले मूर्तिहरू हराउने क्रम कम भएको दाबी गर्नुहुन्छ ।
तस्विरहरु सबै पुरातत्व विभागको वेबसाइटबाट ।
प्रहरीले मूर्ति तस्करीलाई सङ्गठित अपराध मानेर अनुसन्धान गर्छ । मूर्ति र महत्वपूर्ण सम्पदा चोर्न एउटा गिरोह नै सक्रिय छ । चोरिएका मूर्ति रातारात विदेश पुग्छन् ।
त्यहाँका पसल तथा सङ्ग्राहलयमा मूर्तिहरू भेटिए पनि नेपालकै हो, भन्न पेश गर्नुपर्ने आवश्यक प्रमाण पुर्याउन मुस्किल हुन्छ ।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोका डीएसपी कबित कटुवालका अनुसार हराएका तथा अहिले भएका मूर्तिहरूको राम्रो अभिलेख छैन, जसले गर्दा मूर्तिको आकार, प्रकार, तौलदेखि लम्बाइ चौडाइसम्मका पूर्ण जानकारी राख्ने चलन छैन । त्यसैले हराएका मूर्ति कतै भेटियो भने पनि नेपालकै हो भनेर दाबी गर्न सकिँदैन ।
विदेश पुगेका ४ वटा मूर्ति २ वर्षअघि नेपाल ल्याइएको थियो । नेपालमा बनाईएको बुद्धको ६ इन्चको मूर्तिको मात्रै एक करोड रुपैयाँसम्म पर्छ । हराएका परम्परागत र ऐतिहासिक महत्वका मूर्तिको मूल्य अर्बौ पुग्छ ।
मूल्यभन्दा पनि नेपालीका आस्थाका धरोहर मूर्ति विदेशी सङ्ग्राहलयमा अलपत्र परेका छन् । फिर्ता ल्याउने बारे नेपाल सरकारले अहिलेसम्म कामै हुने गरी कुनै योजना बनाएको देखिँदैन ।
यससम्बन्धी रिपोर्ट सुन्नका लागि तलको लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोस्ः
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, वैशाख २०, २०७६, ०२:४७:००
नेपाली नागरिकको पहिचान खोज्दै लाखौं मुसहर र डोम समुदाय